Labo nin oo mid kamid ah waday Baabuurtii ku Qaraxy Muqdisho oo nolosha lagu qabtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 22 December 2018 22 December 2018
Qoraal goordhaw kasoo baxay Hay’ada Nabad sugida iyo Sirdoonka Qaranka ayaa lagu sheegay in ciidamada amaanka qabteen Ninkii hogaaminayay qaraxyadii maanta ruxay Muqdisho iyo ninkii waday gaarigii labaad ee saakay ku qarxay magaalada Muqdisho.
Hay’ada Nabad sugida ayaa sheegtay in ciidamada amaanka qabteen Hogaamiyihii Weerarka qaraxyada iyo ninkii waday gaarigi labaad ee saakay ku qarxay agagaarka Taalada Daljirka Dahsoon .o.
”Ficilladooda arxandarrada ah nama wiiqo doono, dibna nooma celin doono inta Ciidanka iyo Shacabka iskaashanayaan” ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay Hay’ada Nabad sugida iyo sirdoonka Qaranka.
Qoraalka kasoo baxay NISA ayaa lagu sheegay in qaraxyada saakay ruxay ujeedkoodu ahaa in lagu bartilmaameedsado Xarunta Tayaatarka Qaranka oo kasocoto dib u dhis lagu sameenayo ayna ka qeyb qaadanayaan shaqaalaha dowlada.
Wararkii Ugu Dambeeyay Qaraxyadii ruxay Muqdisho iyo Masuuliyiin waxyeelo kasoo gaartay